Lionel Messi Wiilkiisa Ugu Weyn Thiago Oo Durbaba Kulan El Clasico Ah La Badinaya Kooxda Barcelona - Laacib.net
Lionel Messi Wiilkiisa Ugu Weyn Thiago Oo Durbaba Kulan El Clasico Ah La Badinaya Kooxda Barcelona
Lionel Messi wiilkiisa Weyn Thiago ayaa u muuqda mid isku diyaarinaya kulanka El Clasico ee soo socda isagoo ciyaar gacmeedka PlayStation la ciyaarayay aabihiis, waxaana ay la ciyaarayeen kooxda Real Madrid.
Thiago oo ku labisnaa maaliyada Barcelona iyo aabihiis oo waqti nasasho ku jira ayaa ku riyaaqayay ciyaarista ciyaar gacmeedka PlayStation iyadoo weeraryaahnka Argentina iyo xaaskiisa Antonella Roccuzzo ay labaduba soo dhigeen bogagooda Instagram sawirada iyagoo wada ciyaaraya.
Sawirka la qaaday ayaa muujinaya iyadoo Barcelona ay ku garaaceyso Real Madrid 3-1.
Kulanka rasmiga ah ee El Clasico ee Santiago Bernabeu ka dhici doonta ayaa la shaaciyay in la ciyaari doono maalinta Sabtida ee 23ka bisha December ee soo socota, marka ay Saacada Geeska Afrika tahay 3da galabnio.
Kulanka El Clasico-da horyaalka La Liga ayaa ka tirsan kulamada 17 aad ee horyaalka Spain.
Dhanka kale Lionel Messi ayaa ku jira waqti nasasho ah ka dib markii fasax laga soo siiyay xulka qarankiisa Argentina isagoo qeyb ka ciyaaray kulankii saaxiibtinimo ee ay 1-0 kaga badiyeen xulka Ruushka, tababare Sampaoli ayaana u ogolaaday inuu seego kulanka saaxiibtinimo ee ay la ciyaarayaan Nigeria isagoo dib ugu laabtay Barcelona.